Publication 7: Hirgelinta Wanaagsan ee Xeerka iyo Shareecada Islaamka ee Deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya - Mustafe Moallim Ishak Adam
Soomaaliya waa wadan lagaga dhaqmo sharciyo kala duwan sida shareecada Islaamka, xeer dhaqameedyada iyo xeerarka dowladeed ee maxakamadaha. Dowlad goboleedka koonfur galbeed waxey kamid tahay goobaha sharciyadaas lagu dhaqan galiyo.
Haddaba, cilmi baadhistani waxay ujeedadeedu tahay in sharaxaad laga bixiyo hababka iyo wadiiqooyinka looga hirgeliyo xeerka iyo shareecada dee-gaanada koonfur galbeed ee Soomaaliya, kadibna in laga tala bixiyo qaabka ugu wanaagsan, uguna sahlan ee loo dhaqangelin karo sharciyadani. Si loo xaqiijiyo hadafka laga leeyahay daraasadani, waxeynu adeegsaney habka cilmi baadhista tayada (qualitative), inaga oo wareysiyo qoto dheer la yeelaney khubarada kala duwan ee xidhiidhka la leh mowduucani, sida odey dhaqameedyada, garsoorayaasha xeerka, culimada ku takhasustey shareecada islaamka iyo waliba waxgaradka qaybihiisa kala duwan. Natiijooyinka laga gaadhey daraasadani waxa ka mid ah in xeerka iyo shareecada loogaga dhaqmo deegaanada Koonfur galbeed Soomaaliya qaab aan rasmi aheyn – ama ka madax banaan hay’ada rasmiga ah ee dowlada, mana laha xarumo ama maxkamado gaar ah oo loogu hagaago.
Marka aynu eegno xeerka, xukunka dacwadaha waxa si wada jir ah usoo saara garsoorayaasha iyo malaaqyada (cuqaasha) ka kala socoda labada dhinac ee dacwadu ka dhaxeyso; dhibanaha iyo eedeysanaha, hase yeeshee fulinta xukunkaasi waxey u gaar tahay cuqaasha ka socota dhinaca eedeysanaha, sababtuna waa in xeerka uusan ku dhisnayn sharci iyo awood fulineed oo qoran, taa bedelkeeda wuxuu ku dhisanyahay kalsooni iyo dhaqan. Sidoo kale xeerku malaha ciqaab lagu fuliyo qofkii khilaafa iyo dabagal lagu sameeyo fulinta xukunkii la gaarey.
Sidaa awgeed daraasadani waxey talo bixin ahaan u soo jeedinaysaa in qaabka ugu wanaagsan ee looga dhaqan gelin karo xeerka iyo shareecada deegaanada koonfur galbeed ee Soomaaliya ay tahay in la sameeyo xarumo (xafiisyo) ama maxkamado loogu hagaagi karo qaadista sharciyadani iyo in la diiwaangeliyo xeer dhaqameedyada, dabagalna lagu sameeyo xukunka marka la soo saaro kadib, qofkii khilaafana ciqaab la marsiiyo. Dhanka shareecadana garsoorayaashu waa inay noqdaan kuwo aqoon durugsan u leh shareecada, fahansanna waaqica lagu jiro.